Wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo Tacsi udirtay ehelada dadkii ay Xasuuqeen kufaarta Ethopia. | Halganka Online
Wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo Tacsi udirtay ehelada dadkii ay Xasuuqeen kufaarta Ethopia.
Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa maanta ka hadlay Xasuuqii ay shalay Ciidamo ka amar qaata Itoobiya ka geysteen deegaanka ” Ceel-dibir” oo u dhexeeya Degmooyinka ” Cabud Waaq” iyo ” Wardheer” halkaas oo lagu gumaaday dad fara badan oo aan waxba galabsan.
Sh.Yuusuf Sh.Ciise Axmed “Kaba-kutukade”, Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud oo maanta saxaafada la hadlay ayaa sheegay inay aad uga xanuunsanayaan dhibaatada soo gaartay dadka reer “Ceel-dibir” wuxuuna Tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen shacabkii la xasuuqay.
” Waxaan rabaa inaan Tacsi u diro dhamaan dadka Muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan walaalaha reer Ceel dibir, ee dadkoodi biri-magaydada ahaa ay xasuuqeen maamulka umula-dooxa ah ee Itoobiya, kuwaas oo la ogyahay inaysan weligood nabad kula noolaan cid aysan naftooda uga baqaynin, waxaanan u sheegayaa Dowlada Kirishtaanka ah ee Itoobiya inaan looga samri doonin dadkii ay raqdooda haadda u wareen Ceel dibir” sidaas waxaa yiri Sh.Yuusuf Kaba-kutukade.
Sh.Yuusuf Kaba kutukade ayaa sheegay in dadka ay Ciidamada Itoobiya gumaadeen hada iyo mar horeba aysan noqon doonin kuwa aan waxba la iska waydiin doonin, Balse marka ugu horeysa ee fursad loo helo laga aargudan doono Itoobiya iyo cid walba oo gacan ku siisa falalkeeda guracan ee ku dhisan Xiqdiga Saliibiga ah.
Waaliga Galgaduud ayaa u sheegay inay mar walba garab taaganyihiin dadka Muslimiinta ah ee reer “Ceel dibir” kuwaas oo nin doorkoodii la dilay, Hantidoodiina la dhacay, haweenkoodi la fara xumeeyay, deegaankoodiina dab la qabadsiiyay, wuxuuna sheegay in falalka foosha xun ee ka dhacay Ceel-dibir ay yihiin Wejiga runta ah ee Taliska Saliibiga ah ee Itoobiya.
Deegaanka “Ceel Dibir” oo ka mid ah dhulka ay Itoobiya Gumaysato ayaa waxaa maalinkii shalay ahaa ka dhacay Gumaad ay Ciidamo loogu yeeray “New Police” oo ka amar qaata Itoobiya u geysteen ku dhawaad 15 qof oo shacab Soomaaliyeed ah kuwaas oo ay ku jiraan Nabadoono si weyn looga yaqaanay Soomaaliya, Ganacsato iyo Dhalinyaro.
Arintan ayaa kusoo aadaysa maalmo kooban kadib markii uu Madaxweynaha Kooxda Riddada ah “Shariif Sheekh Axmed” uu Adis ababa ka codsaday in lagu taageero 20,000 oo askari oo Itoobiya ay ku jirto si uu ugula Dagaalamo Mujaahidiinta ka arimiya Koonfurta iyo inta badan Bartamaha Soomaaliya.
Shariif Sh.Axmed ayaa ku hadaaqay in Itoobiyada maanta joogta aysan ahayn Itoobiyadii Colaadu naga dhaxaysay, Balse ay hada u taaganyihiin sidii ay Nabad iyo kala dambayn ugu soo dabaali lahayd Soomaaliya, arintaas oo amakaak ku noqotay cid walba oo ka war qabta Taariikhda dheer ee ay isla soo mareen Muslimiinta Soomaaliya iyo Korishtaanka Itoobiya.
« Saliibiyinta Ethopian ah oo Toboneeyo odayaal muslimiin Soomaali ah ku Xasuuqay tuulo udhow degmada Caabud waaq ee gobolka galguduud. Hooyo Soomaaliyeed oo Ka damqatay Bayaankii Ictisaamka markay soo dhaweeyeen ciidan shisheeye in wadanka la keeno waxayna ka tirisay GABAY UMU SAFFA »